Barcelona ayaa isku diyaarinaysa kulanka lugta danbe ee Copa Del Rey, iyaga oo diirada ku haya finalka koobka illaa hadda ay xili ciyaareedkan ugu dhaw yihiin inay ku guulaystaan. Barcelona ayaa kulankii lugta hore ee Copa Del Rey 3:1 guul kaga soo gaadhay kooxda Villarreal.
Laakiin tababare Luis Enrique ayaa laba arimood oo kala daran ay tahay inuu kala doorto, taas oo ah inuu kulanka lugta danbe ee ay Barcelona booqanayso kooxda Villarreal uu kala doorto in Luis Suarez iyo Javier Maschernao uu shaxdiisa ku bilaabo inkasta oo ay min hal kaadh oo dingiin ah u jiraan in haddii ay Barcelona u soo baxdo finalka ay ku seegi karaan.
Inkasta oo ay Barcelona faa’iido u haysato guushii 3:1 ahayd, ayay haddana kooxda Villarreal xili ciyaareedkan tahay koox aan la saadaalin karin, waxaana xusuus mudan in kulankii xalay ay Real Madrid gurigeeda barbaro kula gashay.Enrique ayay u badan tahay in aanu halis wada galin karin labadan ciyaartoy ee Mascherano iyo Suarez oo haddii ay min hal kaadh oo digniin ah qaataan finalka Copa Del Rey haddii ay Barcelona u soo baxdo seegi doona.
Haddii ay dhacdo in Enrique uu Suarez ama Mascherano kulankan ciyaarsiiyo oo uu midkood kaadhka digniinta ah qaato ama ay labaduba qaataan waxay macasalaamayn doonaan haddii ay kooxoodu u soo baxdo finalka.
Suarez ayaan wali wax koob ah kula guulaysan Barcelona wuxuuna ku hamiyayaa inuu koobkiisa ugu horeeya ka dhigto Copa Del Rey oo ay hadda Barcelona ugu cad cadahay laakiin waxaa ka soo horaysay dhibaato ay tahay in marka hore la xaliyo.Erique ayaa tababarkii ugu danbeeyay ee ay maanta Barcelona samaysay ku soo daray Munir El-Hiddadi taas oo u muuqata in uu Suarez nasin karo. Kulanka lugta danbe ee Copa Del Rey ayaa la ciyaari doonaa arbacada.